Dalxiisayaal lagu laayay dalka Burkina Faso, Kadib weerar culus oo ka dhacay Caasimadda dalkaas. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Dalxiisayaal lagu laayay dalka Burkina Faso, Kadib weerar culus oo ka dhacay Caasimadda dalkaas.
Last updated Aug 14, 2017 265 0
Sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya dalka dhaca Qaaradda Afrika ee Burkina Faaso, weerar culus ayaa lagu qaaday hotel ay degaan Dalxiisayaal ka kala yimid daafaha Caalamka oo u badan muwaadiniin Reer galbeed ah, kaas oo ku yaala caasimadda wadankaas ee Ouagadougou.
Mid kamid ah Shaqaalaha hotelka oo Warbaahinta la hadlay wuxuu tibaaxay in saddex Ruux oo hubeysan ay kasoo degeen gaari ay wateen, durbadiina ay rasaas ku bilaabeen dad ku shaaheynayay afaafka hore ee hotelka.
Daqiiqado kadib waxaa goobta soo gaaray Ciidamo katirsan Booliiska dowladda Burkina Faaso, kuwaas oo dagaal la galay raggii soo weeraray hotelka.
Ugu yaraan 18 Ruux ayaa lagu soo waramayaa iney ku dhinteen weerarkan, halka 8 kalena ay ku dhaawacmeen, kuwaas oo kasoo kala jeeda dalal kala duwan oo caalamka katirsan.
Majirto cid sheegatay mas’uuliyadda weerarkan, balse waxaa xusid mudan in dalkan ay ka dhacaan howlgallo ay fuliyaan faraca Alqaacida ee Maqribul Islaam.
Bishii January sanadkii 2016 ayay ahayd markii rag hubeysan ay weerar kusoo qaadeen hotel iyo Maqaaxi ku yaala wadanka Burkina Faaso, halkaas oo ay ku dilene 30 Ruux, kuna dhaawaceen 70 kale, kuwaas oo badankood kasoo jeeday wadamada Reer galbeedka iyo kuwa Gaalada.